Ụbọchị My Pet » 3 Great Atụmatụ Iji Ịmepụta The Best Online dịwara Profaịlụ
3 Great Atụmatụ Iji Ịmepụta The Best Online dịwara Profaịlụ
emelitere ikpeazụ: Oct. 20 2020 | 2 min agụ
Naa, online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-aghọ ihe na ọzọ na-ewu ewu. Ma ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya, ya-eme ka uche. Gbalụ gbalụ ọrụ schedules na-arụsi ọrụ ike ndụ doo nnọọ obere oge izute onye na-ochie ụzọ. Ma online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ mfe karịa ime eme. Isi ihe na-aga nke ọma online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị idu ke profaịlụ gị.
Profaịlụ foto - Nke a image na-esetịpụrụ ndị ogbo. Ma ka-eme ihe n'eziokwu, nwere ike ịbụ a ndibiat emebi n'ihi na ụfọdụ. Ma anyị na-ekweta ma ọ bụ, ahụ mara mma na-arụ a nnukwu akụkụ na a na-achọ ịlụ. Họrọ a foto na showcases gị mma akụ enweghị ndidi kwa mkpughe. Ọzọkwa, jide n'aka na ị na-amụmụ ọnụ ọchị gị na foto dị ka ịmụmụ ọnụ ọchị na-nnọọ ịkpọ. Ndụmọdụ m bụ-anọ n'ebe "selfie" gbaa dị ka ha na-cheesy. Ọzọkwa, anọ n'ebe ìgwè gbaa dị ka ị ga-efu na foto. Ndụmọdụ a na-aga gị isi profaịlụ foto. M na-nye ndụmọdụ bulite ihe karịrị otu foto. Gị etinyewe photos, na-eche na tinye otu gbaa, ịzụ gbaa, wdg. E a na-ewu ewu okwu nke na-aga "a foto bụ uru a puku kwuru" ya mere, ka gị foto ime okwu.
Banyere Gị Nkebi - Ezie na profaịlụ gị foto bụ ihe dị mkpa akpan owo gị online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị profaịlụ, ọdịnaya gị arụ ọrụ dị mkpa dị ka nke ọma. Tupu ị banye-elu maka ihe ọ bụla mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị, ike a ndepụta gị omume ntụrụndụ, ọdịmma, eme, na adịghị ike. Ozugbo na ndepụta zuru ezu, họrọ ihe ndị kasị mkpa ihe na ị dị njikere ịkọrọ. Jide n'aka na ị akọwa n'uju na ntụrụndụ na ọdịmma dị ka ị ga-achọ gị nwere nwunye ịkọrọ ụfọdụ n'ime ha. Ọzọkwa, na-agụnye otú ị na-eji ọtụtụ oge gị dị ka nke a ga-enye gị nwere nwunye na-echiche na-ahụ ma ọ bụrụ na ị bụ dakọtara. Egbu na ọtụtụ ihe, jide n'aka na ị na- 100% n'eziokwu. Enweghị n'eziokwu, ị gaghị ahụ na mkpụrụ obi gị na onye òtù ọlụlụ.
Ihe ị chọrọ A Onye Mmekọ Nkebi - Ma mkpakọrịta nwoke na nwaanyị saịtị na ị banye na-elu-maka nwere nkebi a ma ọ bụ, ị mkpa n'ezie na-agụnye nke a na profaịlụ gị. Chee echiche banyere ihe bụ ihe kasị mkpa gị na onye òtù ọlụlụ. Dee ihe niile si e ji mara na ụkpụrụ na omume na-ihe atụ nke otú ị chọrọ na-eji ndụ gị na onye gị na. Unu ekwesịghị ịda mba ma ọ bụrụ na gị na ndepụta bụ ogologo maka mgbe ị na-amalite ide nkebi a, ị ga-ewepụkwa ihe àgwà na-adịghị a "eme ka ọ ma ọ bụ agbaji ya". My ndụmọdụ ini enye ekewetde nkebi a bụ ilekwasị anya n'ihe na onwe gị na ọdịnihu gị na onye òtù ọlụlụ dokwara. A profaịlụ ọdịnaya kwa arọ on onwe gị na-egosi na ị bụ ịchọ ọdịmma onwe, N'aka nke ọzọ a profaịlụ na showcases ukwuu ọdịnaya na ihe ị na-achọ pụrụ ịbụ ihe mgbochi maka ọdịnihu ma ọ bụ nwunye. Ọzọkwa, jide n'aka na ị na-egosi na-agụ. Misspellings agaghị ị dị nnọọ anya na ihe ọ bụla mkpakọrịta nwoke na nwaanyị website. Egbu, dum usoro nke online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, jide n'aka na i nwere fun! Nke a na ahụmahụ a na-azọrọ na e ịbụ ihe ọmụma, na-akpali akpali, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
4 Nzọụkwụ na Send Zuru Okè mbụ Ozi ka a Nwanyị
Olee Ihe Ị Maara Ị na Ịhụnanya?
Lezie anya nke Ịghọ a Ọkachamara Online Dater